France: Oyongo, yakanunurwa, iri kushanda - Tamban RELAY
France: Oyongo, yakasunurwa, iri kushanda
Montpelfer yakaendesa mutambo wayo wekupedzisira ichitarisana neSher-Etienne (1-0) isina kuruboshwe, Mutambi weCameroon Ambroise Oyongo, Svondo radarika. Akatambura nebvi, nekuda kwekukuvara kwem meniscus. Apora zvakaringana uye achave aripo papepa remutambo rwendo rwakakosha kuMonaco Chishanu uno (20pm), mumutambo wekuvhura iwo makumi maviri neshanu.e Kuneta zuva 1. Montpellier iri kusimba, kunyangwe vamwe vatambi vakati wandei muhurwere. Aimbove Impact Montreal alumnus azviitira weti mune iyi Ligue 1 kirabhu, uko kuita kwake kuri kukwira…
Montpellier inotora chechishanu munzvimbo mune makumi matatu nemapfumbamwe, maviri asingasviki Lille iri pamberi payo ipapo. Nemamwe matatu mapoinzi, iye achange ari pane podium.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.camfoot.com/les-lions-en-club/france-oyongo-remis-est-operationnel,30597.html
TELES RELAY 21719 Posts 0 mashoko
[Tribune] Mila nyaya: mbiri kumhura, maviri matanho - Jeune Afrique
Faure Gnassingbé vanopikisa musarudzo dzemutungamiri wenyika muTogo - Jeune Afrique